Emihle nemibi zokweboleka imali ebhange
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Emihle nemibi zokweboleka imali ebhange
It is a umuzwa oqinile yasebhange sokuphepha ngokuya ukuthi ukuboleka imali, kodwa ngoba kukhona izinhlobo ezahlukene izinhlelo kanye loans, okungenzeka ibe abanye abantu ukuthi isinqumo noma asisho anamathele ezinhle.
Ngaphezu kwalokho, izinzuzo ukuboleka imali ebhange kubalulekile yebo ukuze baqonde futhi yokuntula.
ebhange, ezifana sokunconywa
amabhange kanye nezimali umthengi ukuboleka imali, ukuthi kunezinhlobo ezihlukahlukene ababolekisi, kuyinto ukuboleka imali ebhange izobandakanya izinzuzo enjengalena elandelayo.
uphansi zenzalo, kuye ngokuthi indlela yokusebenzisa
lasebhange, zenzalo eqhathaniswa ezezimali umthengi imisiwe ongaphakeme.
Ikakhulukazi, loan multi-purpose, ngokuthi loan khulula, futhi kukhona ibhange kungaba kuqashwe ngezindleko eziphansi kakhulu senzalo ama-4%.
Ngakho-ke, ngisho kancane wokuboleka, uzodinga umthwalo kancane ngesikhathi sokukhokha imali esinqunywe ngokuvumelana.
Uma isicelo se-ebolekiwe futhi uma abushelelezi
yasebhange asekeleke ku-Inthanethi, uma umuntu ine-akhawunti kusengaphambili, ngabe bayazuza iphuzu isicelo abushelelezi.
ikheli noma igama, ngoba ezifana nobudala nendawo yomsebenzi isivele ibhalisiwe, ngemva uzogcwalisa uma yokugcwalisa, ezifana kwemali isimo. Ngoba lokho kuvumela uhlelo lokusebenza kusuka
smartphone, futhi ephephile abantu abanayo isikhathi noma umsebenzi like noma wasendlini.
Ngaphezu kwalokho, amabhange bebelokhu ukudluliswa iholo yokuqala akhawunti, bese ngokuvamile kuba ulwazi lekhadi ukufika kokubukeza ephakeme kunaleyo nezinye izinhlangano zezimali.
yalokho, ngoba abanye kungaholela anda ongaphakeme inzalo engako, futhi lemali imali, kusuka ukubaluleka, uma Okokuqala ebhange yabo eyinhloko ukucabanga mayelana enqolobaneni, ngoba Kunconywa.
izimali athishela futhi ukuthula kwengqondo lapho udinga < / H2>
endabeni umthengi credit, nakuba ukuhlolwa zokweboleka kuqhathaniswa okuxekethile, umkhawulo kuqala ngokuvamile mayelana 500,000 kusukela 100,000.
Nokho, lapho enza loans ebhange, kubalulekile futhi akukhona okungavamile ukuba likhithike lowo mkhawulo imisiwe njengoba eliphezulu 10 million yen kusuka 5 million yen.
Nokho, lena indaba ukuthi loan bezimoto kanye ingcebo iyona esemqoka. Uma wenza loans igama
ezifana nezindleko ophilayo, kuze ingxenye eyodwa kwezintathu yemali, futhi ngoba kunqunywa umthetho, ne kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani asikwazi ukwenziwa zokweboleka kuphela kule mkhawulo.
isicelo sakho isifinyezo kungenzeka imalimboleko
ngaphezulu ngokufingqiwe ebolekiwe "ukuqiniswa kwesikweletu" futhi, ungasebenzisa e zokweboleka kusuka amabhange.
Lokhu kubuye inkonzo imalimboleko ebhange ehlukile inani eliphezulu isethwe ukwandisa. Njengoba kungenzeka ukucindezela
inzalo engako, futhi inzalo kakhulu, uzoba ephephile ukuthi ngisho nabantu ababebonakala esenkingeni e ukukhokha imbuyiselo.
kubuye isikhathi esiningi nemibi phambi zokweboleka
Uma uboleka imali
yasebhange, isicelo kungenziwa kusuka ezifana Internet noma ifasitela.
Nokho, ukufaneleka umphumela luhlolo isuke isikwenze enziwe ngemva kwezinsuku ezimbalwa kusukela ngosuku olulandelayo. Uma uboleka imali
ikakhulukazi ndawonye okungukuthi, e-luhlolo ngomzuzu Ase kuphawulwe ukuthi kuthatha isikhathi.
umthengi ezezimali kanye eminyakeni yamuva, kungenzeka futhi kwenziwa inkonzo esekelwe luhlolo isivinini e Uri. Nakuba
enjalo inani lemali futhi kuqala wokuboleka isethelwe libe lincane, sidinga imali ngokushesha, kungaba izindaba ezinhle abantu.
Ngaphezu kwalokho, njengoba inani lenzalo futhi indawo ukuya empini ngenxa kanembeza mkhulu, sicela uzame ukubona iwebhusayithi ebhange uma nje ukukhathazeka.
Ikakhulukazi, uma imalimboleko ikhadi yebhange asekeleke ku-Inthanethi, kukhona indawo okuthiwa ngangokunokwenzeka kuze kube okufanayo namuhla Ukubuyekeza nemini loans efanayo.
Nokho, ngenxa yokuthi akukho iwindi ukuletha izincwadi ezidingekayo, ukunakekela iphuzu lapho ngesimo kamuva usuku lwe-imeyili. Kwezinye izimo
, imibhalo ayikwazi eyenziwa kwemali ukufinyelela, ngoba icala obizwa nangokuthi ukuze uqinisekise ukuthi ubhalisele kusukela wafunda kahle.
yasebhange ikhadi esiphezulu izinzuzo kungaba ehlise inani lenzalo.
ezifana uma ufuna isicelo ukuqiniswa kwesikweletu kanye lapho ingcebo okusezingeni eliphezulu ezifana imoto yezitolo, ukuze kuncishiswe ukunciphisa inkokhelo yokugcina iyoba ikhandidethi yokuqala.
Ngaphezu kwalokho, ibhange iyindawo lapho Ochwepheshe sendlela ukusebenzisa izimali abasebenza. Noma
ukubuyisela ngenkathi sigcina ukuphila uma Tatere onjani ukubuyiswa kwemali plan, futhi kulula uthintane zenzalo, kufaka phakathi izinto ezifana kangakanani ukuthi njengesiqondiso, labo bakhathazekile ebolekiwe, kuqala zama ukukhuluma ibhange the kuwumqondo omuhle.